Daawo Sawirro: Sidaan Ayuu Dagaalku Uburburiyay Magaalada Marawi Ee Muslimiinta Filibiin Ay leeyihiin.
Thursday October 26, 2017 - 14:45:42 in Wararka by Super Admin
Melleteriga Filibiin ayaa baabi'iyay mid kamida magaalooyinka ugu waaweyn wadanka Filibiin ahna caasimadda muslimiinta arrinkaas oo muujinaya cadaawadda gaamurtay ee dadka Kirishtaanka ah ay uqabaan dadka muslimiinta ah.
Magaalada Marawi oo kulansatay wabi iyo Bad ayaa noqotay mid lama degaan ah kadib lix bilood oo dagaallo faraha looga gubtay ay ka dhacayeen, horraantii bishii May 2017 waxaa magaalada ka bilaawday dagaallo culus kadib markii ay xoogaga islaamiga Mouty oo isbahaysi ka helaya Abuu Sayaaf ay qabsadeen Marawi.
Melleteriga dowladda Filibiin ayaa jamaacaadka islaamiga ee isbahaystay ugu baaqay in ay ka baxaan magaalada ayna soo dhiibaan Hoggaamiye liiska Argagaxisada ugu jira FBI-da Mareykanka balse dalabkaas ayay gaashaanka u daruureen xoogagii jihaadiga ahaa.
Dowladda Filibiin oo taageera ka helaysa Mareykanka ayaa dhammaan wixii awood ah oo ay heysatay u adeegsatay dagaalka Marawi, Nus milyuun qof oo magaalada deganaa ayaa guryahooda isaga barakacay halka boqolaal qof muslimiin ay ku dhinteen dagaalladii cuslaa ee magaaladu marti gelisay.
Sawirro ay faafiyeen wakaaladaha wararka Reer galbeedka iyo warbaahinta maxalliga ah ee Filibiin ayaa muujinayay burburka baaxadda leh ee gaaray Marawi oo ah magaalo muslimiintu leeyihiin.
Kooxda Mouty waxay isbahaysi lagashay Abuu Sayaaf oo Xiriir laleh Ururka dowladda islaamiga ah ee ka dagaallama Ciraaq iyo Suuriya, Masjid jaamaca weyn ee Marawi ayaa burburay halka madaaris iyo dhismayaal caan ah duqeymo dhulka lagula simay.
inkastoo xoogagii islaamiga ahaa magaalada laga qabsaday hadane hoggaamiyaasha muslimiintu waxay ku eedaynayaan dowladda in ay geysatay baaba’ guud iyadoo hub mamnuuc ah u adeegsatay dagaalka.
Bankiyo warshado ay caan ku aheyd Marawi ayaa hadda ah kuwa aan wax kasoo qaad laheyn, lacago balaayiin dollar ah ayuu dagaalku khasaariyay waxaana adkaan doonta sida magaaladu dib ugasoo kasbato dhibaatadii gaartay sababa laxiriirka dadka Filibiin oo badankood ah faqri.